असोज ६ गतेदेखि आउने साहस उर्जाको आईपीओ कति कित्ता कहिले सम्म भर्न पाइन्छ ? थाहा पाउनुहोस् - Abhiyan news
असोज ६ गतेदेखि आउने साहस उर्जाको आईपीओ कति कित्ता कहिले सम्म भर्न पाइन्छ ? थाहा पाउनुहोस्
३१ भाद्र २०७८, बिहीबार १६:४१ अभियान न्यूजLeaveaComment on असोज ६ गतेदेखि आउने साहस उर्जाको आईपीओ कति कित्ता कहिले सम्म भर्न पाइन्छ ? थाहा पाउनुहोस्
साहस उर्जा लिमिटेडले यही असोज ६ गतेदेखि सर्वसाधारणका लागि आईपीओ निष्काशन गर्ने भएको छ। कम्पनीले ७० करोड रुपैयाँ बराबरको आईपीओ निष्काशन गर्न लागेको हो। यस अनुसार कम्पनीले प्रतिकित्ता १०० अंकित मूल्यका ७० लाख कित्ता साधारण शेयर निष्काशन गर्नेछ।
निष्काशन गरिने कुल शेयरमध्ये ३ प्रतिशत अर्थात २ लाख १० हजार कित्ता शेयर कर्मचारीहरुका लागि र ५ प्रतिशत अर्थात ३ लाख ५० हजार कित्ता शेयर सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याइएको छ। सर्वसाधारणले बाँकी ६४ लाख ४० हजार कित्ताका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। सो शेयरमा सर्वसाधारणले असोज १० गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ।
सो अवधिमा पूर्ण आवेदन नपरेमा असोज २० गतेसम्म आवेदन दिने मिति लम्बिनेछ। सो शेयरमा न्यूनतम १० कित्ताका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ भने अधिकतममा १० लाख ५० हजार कित्ता शेयर खरिदका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ। आईपीओ निष्काशनका लागि गराएको रेटिङ्गमा इक्रा नेपालले कम्पनीलाई इक्राएनपि आईआर डबल बी प्लस रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई घरमै पुगेर नागरिकता
वैदेशिक रोजगार : ठगी नियन्त्रण गर्न ‘र्‍यापिड रेस्पोन्स’ टिम गठन
३ पुष २०७८, शनिबार १३:०२ news DM
सानिमा लाईफको आईपीओ शेयरधनीहरुको खातामा जम्मा
१४ भाद्र २०७८, सोमबार १४:३४ अभियान न्यूज
९ भाद्र २०७८, बुधबार ०१:३६ अभियान न्यूज